Soosaarka Shiinaha iyo Warshadeynta | Wangtong
Lipstick waa waxyaabaha la isku qurxiyo ee loo isticmaalo dumarka maalinlaha ah. Ma taqaanaa sida loo mariyo baruurta? Waa kuwan qaar ka mid ah hababka loo mariyo baruurta.
1. Sida loo rinjiyeeyo lipstick-ga burushka bushimaha:
Codso lakabka xayrta ah intaadan codsan si aad uga ilaaliso bushimaha inay xoqmaan.
Haddii gabdhaha bushimaha madow ay marka hore mari karaan lakabka kareemka aasaasiga ah, si siman u mari bushimaha si aad ugu daboosho waxyaabaha qariya ee faraha, iyo haddii gabdhaha bushimaha fudud ay sameyn karaan aasaas la'aan.
Qarso qalin qalin oo ku wareegsan qaabka bushimahaaga, ka dibna mari lipstick-kaaga si aad u abuurto xariiq cad oo ah nuuradda nuuradda ah oo xoojineysa midabka lipstick-kaaga.
2. Dibnaha M:
Marka hore, suufka suufka ku dheji iftiinka iftiinka oo mari M bushimaha kore si aad u iftiimiso cidhifyada bushimaha oo aad u iftiimiso bushimaha M.
Dhex geli burushka bushimaha mar labaad qaado lipstick-ka nooca "M" si aad u qaaddo daub bidix iyo midig, meesha bushinta bushimaha ayaa soo jiidanaysa barta sare, dhexda faruurta afkeeda waxay u jiideysaa sida ugu macquulsan ee ugu hooseysa.
3. Daahan qaro weyn:
Tani waa habka ugu caamsan ee loo mariyo baruurta.
Faruuryaha guud ayaa farta lagu fiiqay, waxaan dhajineynaa caarada lipstick-ka kor, labo garaac oo fudud bartamaha dibnaha si loo sameeyo V qaab loogu talagalay
Kadib, adiga oo madaxaaga dhibciisu hooseeyo, ka bilow geesaha afkaaga oo hoos uga dhaadhac bartamaha afkaaga si aad u qeexdo cirifka bushimahaaga sare.
Kadib dhalaali bushimaha hoose oo dhowr jeer mari ilaa bushimaha ay si siman u dhergaan.
4. bushimahaaga qaniin:
U adeegso astaamaha bushimaha si aad u caddeyso afkaaga wax qariya oo ku daboola midabkiisa asalka ah.
Isticmaal buraashka faruuryaha si aad ugu rusho xayrta bushimaha gudaha bushimahaaga. Isticmaal farahaaga si aad ugu fidisid lipstick-ka banaanka afkaaga. Si siman u dalbo.
Xeeladaha loo adeegsanayo lipstick-kan ayaa ah in midabka mugdiga laga beddelo oo laga beddelo gudaha gudaha.
Ugu dambayn, mari lipstick-ga gudaha bushimahaaga si aad u qotooto midabka afkaaga.
Ama sida ugu fudud ayaa ah inaad iibsato casaan laba-midab leh!
5. Isku laab daahan:
Inbadan oo lipstick ah ayaa dib loo iibsaday si loo ogaado in saameynta codsi kaliya uusan u fiicneyn sida male, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad adeegsato habka isku darka si aad lipstickkaaga ugu muuqato mid tayo leh.
Habkani waa kan ugu fudud, sida habka daahan ee qaro weyn ee caadiga ah, ku dhaji bushimaha bushimaha, ugu dambaynna ku mari lakab lipstick dusha sare ah oo aad rabto saamaynta midab bixinta ee Blingbling
5. Habka dahaadhka cas ee aan dhejiska lahayn:
Tallaabada ugu horreysa waa inaad si fudud u maristaa lakabka lipstick-ka, ka dibna xoogaa afkaaga ku cadaadi warqad. Qaado cad oo gogo 'ah, oo bushimahaaga saar oo ku nadiifi burushka bushimaha.
Dab ka buuxo oo bushimahaaga kor ugu tirtir tuwaal waraaq ah.
Qaabkaas ayay xardhaduhu ugu dhejin doonin koobka!
Hore: Hooska indhaha